🥇 accounting yeklinikhi yamazinyo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 243
Ividiyo yokwenza ingxelo yeklinikhi yamazinyo
Yenza iodolo accounting yekliniki yamazinyo
Umsebenzi weklinikhi yamazinyo ufuna ubalo olululo kunye nokulawulwa kwangexesha kwabaxumi, oogqirha bamazinyo kunye nabalawuli. Isoftware yovavanyo lweklinikhi yamazinyo yinkqubo esebenzayo yokubala enceda abalawuli kunye nentloko yamazinyo. Ukufaka isicelo sogcino-zincwadi kulawulo lweklinikhi yamazinyo, kufuneka uchwetheze igama lakho lomsebenzisi, ukhuselwe ngegama eligqithisiweyo, kwaye ucinezela i icon kwidesktop yakho. Ukongeza kuloo nto, umsebenzisi ngamnye wesoftware yeklinikhi yamazinyo unamalungelo athile okufikelela, athintela inani ledatha ebonwa ngumsebenzisi kwaye ayisebenzise. Ukuzenzekelayo kwekliniki yamazinyo kuqala ngokwenza abathengi. Apha, abasebenzi bakho basebenzisa inkqubo yezonyango yeklinikhi yamazinyo ukwenza idinga nomthengi. Ukubhalisa isigulana kufuneka ucofe kabini kwixesha elifunekayo kwithebhu kagqirha oyimfuneko kwirekhodi yefestile yeklinikhi yamazinyo kwaye ubonise iinkonzo ezinokuthi zikhethwe kuluhlu lwamaxabiso asele eqalile.
Lonke ulwazi luyagcinwa kwaye lunokuhlelwa kwisicelo seklinikhi yamazinyo, kuthathelwa ingqalelo izinto ezithile zombutho wakho. Isoftware yobalo kulawulo lweklinikhi yamazinyo inecandelo 'leengxelo' eziluncedo kakhulu kwintloko yeziko. Kweli candelo lolawulo lweklinikhi yamazinyo, wenza iingxelo ezohlukileyo kwimeko yalo naliphi na ixesha. Umzekelo, ingxelo yevolumu yokuthengisa ibonisa ukuba ichithe malini kwinkqubo ethile. Ingxelo yentengiso ibonakalisa iziphumo zentengiso. Ingxelo yolawulo lwesitokhwe ibonisa ukuba zeziphi izinto eziya kuthi kungekudala zifunwe uku-odolwa kwakhona ukuze kugcinwe indawo yokugcina. Isicelo seklinikhi yamazinyo ayifanelekanga kuphela kubo bonke abasebenzi bezonyango, kodwa ikwavumela ukuba useke ubudlelwane kunye nabathengisi bempahla, abanini mhlaba kunye neenkampani zeinshurensi. Unokukhuphela ingxelo yasimahla yesoftware yobalo lweklinikhi yamazinyo kwiwebhusayithi yethu. Ngokuzenzekelayo umbutho wakho ngoncedo lwenkqubo yokubalwa kweklinikhi yamazinyo!
Ukulawulwa kweziphumo kunye nokubeka iliso kuzo zonke iinkqubo ngoyena ndoqo wokumisela ucwangco kwikliniki yamazinyo. Ukukhula kwengeniso kunye nokwehliswa kweendleko kuya kuba sisiganeko esingahleliwe ukuba awugcini umkhondo weziphumo. Inkqubo yobalo-mali ibamba izikhombisi kuwo onke amanqaku olawulo, yakha amandla otshintsho kunye nolwalamano olunobangela weziphumo, emva koko ibonise ulwazi olwenziweyo ngohlobo lweengxelo kunye neengcebiso. Oku kuqinisekisa ukungqinelana kweziphumo. Ngokumalunga nokwanda kweshishini-le yinto nawuphi na umphathi wekliniki yamazinyo aphupha ngayo. Khawufane ucinge ukuba sele ufikile kwinqanaba apho ishishini lakho lincinci kakhulu phantsi kweemeko ezikhoyo. Kwaye ukwandisa ishishini lakho kuyavakala kuphela kwifomathi yeenkonzo ezongezelelweyo. Usombulule ingxaki ngokurenta, izixhobo, kunye nokuqesha abasebenzi. Kodwa iqela leminye imibuzo lihleli: Ungabaqeqesha njani abasebenzi, ubanike lonke ulwazi kunye namava osele uwafumene? Ulawula njani umsebenzi wabo? Uzibeka njani izicwangciso kwaye ujonge iziphumo? Ukuzenzekelayo kwishishini kusombulula yonke le mibuzo.
Inkqubo yeUSU-Soft accounting yakhelwe kumgaqo wokwahlulwa kwemisebenzi - kuxhomekeke kwindima umsebenzi angene kuyo. Kukho iindima ezisisiseko ('uMlawuli', 'uMlawuli', 'uGqirha wamazinyo'), kodwa ukongeza kuwe Unokudala iindima kunye neeakhawunti zabanye abasebenzi baseklinikhi, ezinje nge'Accountant ',' iNgcali yeNtengiso ',' Ingcali yezokuthenga 'njalo njalo. Indima yokungena kwinkqubo yobalo imiselwe ngumsebenzi, osetelwe xa kusenziwa ikhadi kunye neakhawunti (iphasiwedi yokungena kwinkqubo yobalo) yomqeshwa ngamnye. Ke, kuya kufuneka ugcwalise ulwazi malunga nomqeshwa. Ulwazi oluncinci olufunekayo ligama lokuqala, igama lokugqibela kunye nomsebenzi. Ukuchaza umsebenzi, cofa ekunene kwicandelo 'Khetha ubuchwephesha' kwaye ungeze ukhetho kuluhlu olucetyisiweyo (isikhombisi 'soPhando' sele sigcwalisiwe kuthi kwinqanaba lokufakwa kwenkqubo, kodwa ungayihlela). Ukuba umqeshwa unemisebenzi emininzi, akukho mfuneko yokwenza amakhadi aliqela. Kwanele ukubalula bonke ubuchwephesha bakhe kwelinye. Ukwenza oku kucofa ekunene kwicandelo lomsebenzi kwaye wongeze ukhetho kuluhlu olucetyisiweyo.
Isicelo sineengxelo ezininzi ukubonisa imeko yophuhliso lweklinikhi yamazinyo. Ingxelo 'yokungena kwemali' ibonisa ukungena nokuphuma kwemali kwaye ikuvumela ukuba ulawule. Ukuba ingxelo yemali yosuku iyafana nengxelo eveliswe kwinkqubo yobalo, ungatsho ngokuzithemba ukuba zonke iiodolo kunye neentlawulo ziqhutywa ngenkqubo yobalo, kwaye idatha yezemali inokuthenjwa.
Ingxelo 'yeNgeniso yemisebenzi' ikuvumela ukuba ubone ukuba ingakanani indawo nganye yekliniki kunye nogqirha wamazinyo ozisa kuyo. Ungayisebenzisa ukugcina umkhondo wamatyala ezigulana kunye nokuqhubela phambili, inani lembuyekezo, unyango kwakhona phantsi iwaranti, inani leenkonzo ezihlawulisiweyo, isixa esihlawuliweyo, kunye nezinye iimetrikhi ezibalulekileyo zemali Iingxelo zokuchongwa zikunceda ukubeka esweni ixesha lesigulana elichithwe ekliniki. Eli liqela elibaluleke kakhulu leengxelo. Ukusebenza kunye nabo kukuvumela ukuba ufikelele kwinqanaba elitsha lenkonzo kunye nokuphucula ukusebenza koogqirha kunye nabalawuli, kwaye ke ukwandisa inzuzo yeklinikhi. Ingxelo 'yoGqirha' yoMthwalo ibonisa ukuba ngaba ishedyuli yenziwe ngokufanelekileyo, ukuba ugqirha ngamnye uluncedo kangakanani eklinikhi, kwaye nguwuphi ugqirha ozisa eyona ngeniso.